ukuzijabulisa Interactive virtual nsuku zonke is kuyanda, ubambe nababukeli abakhulayo abalandeli, kanye boom enkulu in ukuthandwa samanje, lapho imidlalo fashion amanethiwekhi omphakathi. Yebo, izinkulungwane zabo, ezihlukahlukene kakhulu futhi ezithakazelisayo, kodwa lesi sihloko sizoxoxa iphrojekthi ezimbili ethandwa kakhulu ngokuthi "Tyuryaga" futhi "Vormiks", noma kunalokho, sizoxoxa ngendlela ukubulala abaphathi kulezi imidlalo. Phela, lokhu akukona umsebenzi elula ukuthi akudingi nje kuphela ukuqeqeshwa, kodwa futhi ukuxhumana efanele nomphakathi nabanye abadlali.
In game ngamunye, kungakhathaliseki ukuthi is a multi-yomsebenzisi, kwenziwa umsebenzi omkhulu noma elula kancane umdlalo isiphequluli nomphakathi, kukhona okuthiwa umphathi. Futhi ngaphambi kokuba ukwazi ukuthi ukubulala boss, sokuqala ukuba baqonde ukuthi limelela. Umholi isikhala virtual - lena omele eziqine, okuyinto ungakwazi ukunqoba imizamo emikhulu kuphela. Anakho isilinganiso lokusinda okusezingeni eliphezulu, has ezingeni lelisetulu ukuthuthukiswa, nebutho lakhe kuyinto enamandla okubhubhisa konke endleleni yayo. Ngokuvamile kuba enkulu, onekhono futhi cishe invulnerable, kungaba kuphela ukunqoba ne indlela ethize kanye amaqhinga. Ngenhlanhla, izindlela ezinjalo zitholakala kalula, kodwa kanzima ukuze kuqaliswe ukusebenza, ngakho impumelelo kuncike umsebenzisi. Ngakho-ke, umbuzo kanjani ukubulala boss, ungathola ngempela impendulo ilula:-ke kudingeka ukuba nje uthole indlela ethile.
Boss 'Okusezwini slammer "
"Tyuryaga" - ethandwa kakhulu bakamalalahlengezela yabadlali abaningi umdlalo nomphakathi mayelana udilikajele. Umsebenzisi ngamunye angafakwa ku bese uzama aphumelele, nenhlonipho nengcebo kuleli koloni, sigcina imithetho, imithetho, kanye nokulalela bebodwa self-ukulondolozwa isazela. Boss 'Okusezwini slammer "yiliphi igunya kwesigaba wekoloni, ngaphezu kwalokho, boss kungenzeka yena ikhanda kuleli koloni, Nokho, usadinga ukufika kulo. Abaholi kule phrojekthi umdlalo impela eningi, futhi ngalinye linomsebenzi izici zayo siqu esiyingqayizivele. Futhi khona-ke kuphakama umbuzo, indlela ukubulala abaphathi 'Okusezwini slammer ". Njengoba kuvela, imfihlo ulula, wena kuphela kudingeka uhlanganyele bonke abadlali, nabo bezama ukufezekisa into the game. Basize uyahoxa, zixhumana, wengeze ohlwini lwakho contact bese uxhumana nabo. Konke lokhu kuzokwandisa ukubabiza usizo. Yebo, umqashi kule phrojekthi zinganqotshwa kuphela uma Gonna ushayele inombolo enkulu abangane ezokwenza ngokuzenzakalela ukubhubhisa ingxenye enkulu yempilo yakhe. Futhi kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke kuphuma kuwe, kumane nje ukuqeda.
Boss 'Vormikse "
"Vormiks" - yesibili ethandwa kakhulu yabadlali abaningi yezenhlalakahle umdlalo lapho umsebenzisi ithatha umyalo ihlukane izimpethu, ngizama ukubakhumbuza ukuthi nguye umdlali best kuleli zwe virtual. Ngomqondo onabile, ngamunye wethu kudlalwa esikhathini esidlule e Worms, futhi lo mdlalo yezenhlalakahle cishe ngqo ikhophi retroproekta, nakuba lapha kukhona ezingeni yentuthuko, tournaments, PvP izimpi osomapolitiki. Nababengobhongoza balokho kuvukela abayizitha ezinkulu amakhono eliyingqayizivele futhi amaqhinga ezithile senzo. Indlela ukubulala boss e "Vormikse"? Kuyinto lilula lapha, futhi, udinga ukuthola indlela kukho. Ingabe Izikhathi eziningana ezimelene naye ekulweni, ukuqonda isimiso emsebenzini wayo, bese sithathe ezinye amaqhinga kanye izikhali ngokuwina. Kukhona futhi abaphathi, lowo udinga ukuba akhulume lamabutho abadlali, kodwa kukhona zonke incike iqembu nokusebenzisana kwakho.
Lapha, eqinisweni, zonke izincomo ezinkulu sizophendula umbuzo kanjani ukubulala boss. Kodwa ngisho nalezi amathiphu ungakhohlwa ukuthi impumelelo eyinhloko umdlalo wakho ukuthuthukisa iphrofayli yabo, ukuthola izikhali esebenza kahle kakhulu ezinye izinto ngoba umdlalo yimpumelelo. Noma yimuphi iseluleko olwengeziwe akusizi ngempela, ngoba zonke kuyoba kancane kancane phakathi umdlalo. Kholwa wena, amandla akho, futhi ungakhohlwa mayelana nokuxhumana nabanye, konke lokhu kuyokusiza ukuba aphumelele.
Saints Row 4 Izidingo zesistimu futhi Khipha Izinsuku
Iresiphi Eliqinisekisiwe: isoseji itiye elimnandi
Yini humidifier kangcono